ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ နဲ့ ဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့ အထိပင် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်က ပြောဆို – Let Pan Daily
ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီးပဲ၊ ကျွန်တော် တို့ ဆက်ဆံရေး အားလုံးကို ဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်တယ်ထရန့်က အခုအချိန်မှာ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်နဲ့ စကားမပြောလိုကြောင်းနဲ့ ဆက်ဆံရေးပင် ဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတထရန့်က ယခု ကဲ့သို့ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်တို့ကြား ဆက်ဆံရေးတင်းမာမှု ပိုမိုဆိုးရွားလာတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီးပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ဆံရေးအားလုံးကို ဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်တယ်၊ တစ်ကယ်လို့ အခု အဲဒီလို လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လာမလဲ? ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဘီလီလံ သက်သာသွားမယ်” လို့ မေ ၁၄ ရက်နေ့က Fox Business ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းဌာနရဲ့ Mornings With Maria အင်တာဗျူး အစီအစဉ်မှာ ထရန့်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ထရန့် ရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဘီလီယံဟာ မည်သည့်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း အတိအကျ မသိရပေမဲ့ တရုတ်ကနေ အမေရိကန်ကို နှစ်စဉ် တင်သွင်းနေတဲ့ သွင်းကုန်တန်ဖိုးပမာဏ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Fox Buniness နဲ့ အင်တာဗျူးမှာပင် တရုတ်က ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ကို ထိန်းချုပ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် အလွန်စိတ်ပျက်ကြောင်းလည်း ထရန့်က ပြောခဲ့ပါတယ်။COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားလာမှုကြောင့် အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်တို့ကြား ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်လည်း ရှေ့မဆက်နိုင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထရန့်ရဲ့ ယခုပြောဆိုမှုအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဩဇာကြီးမားတဲ့ Global Times သတင်းဌာနရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် Hu Xijin က ဝေဖန်ခဲ့ကြောင်း Reuters သတင်းက ပြောပါတယ်။
ဒီသမ္မတက ဟိုတစ်ခါ ကလည်း COVID-19 လူနာတွေကို ပိုးမွှားသတ်ဆေးထိုးဖို့ အကြံပေးခဲ့သေးတယ်လေ၊ အခု တရုတ်နဲ့ ဆက်ဆံရေးအားလုံး ဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်တယ်လို့ သူပြောတဲ့အပေါ် အံ့ဩစရာ မရှိပါဘူးဒီသမ္မတက ဟိုတစ်ခါကလည်း COVID-19 လူနာတွေကို ပိုးမွှားသတ်ဆေးထိုးဖို့ အကြံပေး ခဲ့သေးတယ်လေ၊ အဲဒါကို မှတ်မိတယ် မဟုတ်လား၊ ဒါဆိုရင် အခု တရုတ်နဲ့ ဆက်ဆံရေးအားလုံး ဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်တယ်လို့ သူပြောတဲ့အပေါ် အံ့ဩစရာ မရှိပါဘူး” လို့ Hu Xijin က Twitter မှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
ထရန့်နဲ့ ၎င်းရဲ့ ရီပတ်ဘလစ်ကင် ထောက်ခံသူတွေက တရုတ် အစိုးရဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ပြင်းထန်မှုနဲ့ အတိုင်းအတာကို ကမ္ဘာကို သတိပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲထားကြပါတယ်။ ထို့အတူ COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တရုတ်အလယ်ပိုင်း ဝူဟန်မြို့ရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းကနေ ထွက်လာခဲ့ကြောင်း အယူအဆကိုလည်း ထရန့်က ပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း နိုင်ငံတွေအနက် COVID-19 ကူးစက်မှု နဲ့ သေဆုံးမှု အများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ ယနေ့ (မေ ၁၅ ရက်) မနက်ပိုင်းအထိ အမေရိကန်မှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၁.၄ သန်းကျော်၊ သေဆုံးသူ ၈၅,၀၀၀ ကျော်နဲ့ ပြန်လည်သက်သာသူ ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ စာရင်းတွေအရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ COVID-19 ကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက် ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်လွန်လာခဲ့ကြောင်းနဲ့ ကူးစက်ခံရသူဟာလည်း နေ့စဉ် တိုးလာနေဆဲဖြစ်ပြီး ၄.၄ သန်းကျော်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်လည် သက်သာလာသူ ၁.၆ သန်းကျော်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကြှနျတျောတို့ လုပျနိုငျတာတှေ အမြားကွီးပဲ၊ ကြှနျတျော တို့ ဆကျဆံရေး အားလုံးကို ဖွတျတောကျပဈနိုငျတယျထရနျ့က အခုအခြိနျမှာ တရုတျသမ်မတ ရှီကငျြ့ဖငျြနဲ့ စကားမပွောလိုကွောငျးနဲ့ ဆကျဆံရေးပငျ ဖွတျတောကျပဈနိုငျကွောငျး ပွောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သမ်မတထရနျ့က ယခု ကဲ့သို့ ခွိမျးခွောကျပွောဆိုမှုဟာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျ ပြံ့နှံ့မှုနဲ့ ပတျသကျပွီး အမရေိကနျနဲ့ တရုတျတို့ကွား ဆကျဆံရေးတငျးမာမှု ပိုမိုဆိုးရှားလာတဲ့ လက်ခဏာတဈရပျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ လုပျနိုငျတာတှေ အမြားကွီးပဲ၊ ကြှနျတျောတို့ ဆကျဆံရေးအားလုံးကို ဖွတျတောကျပဈနိုငျတယျ၊ တဈကယျလို့ အခု အဲဒီလို လုပျလိုကျမယျဆိုရငျ ဘာဖွဈလာမလဲ? ဒျေါလာ ၅၀၀ ဘီလီလံ သကျသာသှားမယျ” လို့ မေ ၁၄ ရကျနကေ့ Fox Business ရုပျမွငျသံကွား သတငျးဌာနရဲ့ Mornings With Maria အငျတာဗြူး အစီအစဉျမှာ ထရနျ့က ပွောခဲ့ပါတယျ။
ထရနျ့ ရညျညှနျးခဲ့တဲ့ ဒျေါလာ ၅၀၀ ဘီလီယံဟာ မညျသညျ့အတှကျဖွဈကွောငျး အတိအကြ မသိရပမေဲ့ တရုတျကနေ အမရေိကနျကို နှဈစဉျ တငျသှငျးနတေဲ့ သှငျးကုနျတနျဖိုးပမာဏ ဖွဈနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ Fox Buniness နဲ့ အငျတာဗြူးမှာပငျ တရုတျက ဗိုငျးရပျဈကူးစကျပြံ့နှံ့မှု ကို ထိနျးခြုပျရနျ ပကျြကှကျခဲ့ပွီး COVID-19 ကပျရောဂါဖွဈခဲ့ခွငျးအပျေါ အလှနျစိတျပကျြကွောငျးလညျး ထရနျ့က ပွောခဲ့ပါတယျ။COVID-19 ကူးစကျဖွဈပှားလာမှုကွောငျ့ အမရေိကနျနဲ့ တရုတျတို့ကွား ကုနျသှယျရေး သဘောတူညီခကျြလညျး ရှမေ့ဆကျနိုငျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ထရနျ့ရဲ့ ယခုပွောဆိုမှုအပျေါ တရုတျနိုငျငံမှာ ဩဇာကွီးမားတဲ့ Global Times သတငျးဌာနရဲ့ အယျဒီတာခြုပျ Hu Xijin က ဝဖေနျခဲ့ကွောငျး Reuters သတငျးက ပွောပါတယျ။
ဒီသမ်မတက ဟိုတဈခါ ကလညျး COVID-19 လူနာတှကေို ပိုးမှားသတျဆေးထိုးဖို့ အကွံပေးခဲ့သေးတယျလေ၊ အခု တရုတျနဲ့ ဆကျဆံရေးအားလုံး ဖွတျတောကျပဈနိုငျတယျလို့ သူပွောတဲ့အပျေါ အံ့ဩစရာ မရှိပါဘူးဒီသမ်မတက ဟိုတဈခါကလညျး COVID-19 လူနာတှကေို ပိုးမှားသတျဆေးထိုးဖို့ အကွံပေး ခဲ့သေးတယျလေ၊ အဲဒါကို မှတျမိတယျ မဟုတျလား၊ ဒါဆိုရငျ အခု တရုတျနဲ့ ဆကျဆံရေးအားလုံး ဖွတျတောကျပဈနိုငျတယျလို့ သူပွောတဲ့အပျေါ အံ့ဩစရာ မရှိပါဘူး” လို့ Hu Xijin က Twitter မှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။
ထရနျ့နဲ့ ၎င်းငျးရဲ့ ရီပတျဘလဈကငျ ထောကျခံသူတှကေ တရုတျ အစိုးရဟာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျပြံ့နှံ့မှု ပွငျးထနျမှုနဲ့ အတိုငျးအတာကို ကမ်ဘာကို သတိပေးရနျ ပကျြကှကျခဲ့ကွောငျး စှပျစှဲထားကွပါတယျ။ ထို့အတူ COVID-19 ကပျရောဂါဖွဈစတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈဟာ တရုတျအလယျပိုငျး ဝူဟနျမွို့ရှိ ဓာတျခှဲခနျးကနေ ထှကျလာခဲ့ကွောငျး အယူအဆကိုလညျး ထရနျ့က ပွောဆိုထားခဲ့ပါတယျ။
အမရေိကနျဟာ ကမ်ဘာတဈဝှမျး နိုငျငံတှအေနကျ COVID-19 ကူးစကျမှု နဲ့ သဆေုံးမှု အမြားဆုံးဖွဈပှားတဲ့ နိုငျငံဖွဈနပေါတယျ။ ယနေ့ (မေ ၁၅ ရကျ) မနကျပိုငျးအထိ အမရေိကနျမှာ COVID-19 ကူးစကျခံရသူ ၁.၄ သနျးကြျော၊ သဆေုံးသူ ၈၅,၀၀၀ ကြျောနဲ့ ပွနျလညျသကျသာသူ ၃၀၀,၀၀၀ ကြျောရှိခဲ့ပါတယျ။ယနေ့ စာရငျးတှအေရ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ COVID-19 ကွောငျ့ သဆေုံးသူအရအေတှကျ ၃၀၀,၀၀၀ ကြျောလှနျလာခဲ့ကွောငျးနဲ့ ကူးစကျခံရသူဟာလညျး နစေ့ဉျ တိုးလာနဆေဲဖွဈပွီး ၄.၄ သနျးကြျောရှိလာခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျခံရပွီး ပွနျလညျ သကျသာလာသူ ၁.၆ သနျးကြျောရှိခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။